Rewind: Maitiro ekuita Backup Yako Shopify kana Shopify Plus Chitoro | Martech Zone
China, December 9, 2021 China, December 9, 2021 Douglas Karr
Masvondo mashoma apfuura anga achigadzira zvakanyanya nemutengi weindasitiri yemafashoni watiri kuvhura saiti yakananga-kune-vatengi. Uyu mutengi wechipiri watakabatsira naShopify, yekutanga yaive sevhisi yekutumira.
Isu takabatsira mutengi uyu kuvaka uye kugadzira kambani, vakagadzira chigadzirwa chavo uye nzira yekushambadzira, vakavaka yavo Shopify Uyezve saiti, yakabatanidzwa kune yavo ERP (A2000), yakabatanidzwa Klaviyo kune yedu SMS uye email meseji, yakabatanidza dhesiki rekubatsira, kutumira, uye masisitimu emitero. Kwave kuri kuita basa netoni yekuvandudza yemaitiro echivanhu munzvimbo yese.
Shopify ndeye yakakura sisitimu, ine maPOS maficha, chitoro chepamhepo, uye kunyange nhare kutenga kuburikidza neShop app yavo. Zvinoshamisa kuti, kunyange Shopify Plus - yavo bhizinesi mhinduro - haina otomatiki backups uye kupora! Nechinofadza, pane inoshamisa puratifomu yakanyatso kusanganiswa kuburikidza neShopify App iyo inokuchengetera ma backups ako ezuva nezuva ... inodanwa. Rewind.
Rewind inovimbwa neanopfuura 100,000 masangano kare uye ndiyo inotungamira yekuchengetedza sevhisi yeShopify. Zvimiro uye mabhenefiti zvinosanganisira:
Chengetedza Chitoro Chako -Chengetedza zvese, kubva kune yega chigadzirwa mafoto kune metadata kuchitoro chako chese.
Sevha Nguva neMari -Manual CSV backups inotora nguva uye yakaoma. Rewind inodzosera data rako otomatiki, ichipa set-iyo-uye-kukanganwa-iyo data chengetedzo.
Dzosera Critical Data muMinutes -Usarega kunetsana kwesoftware, buggy app, kana malware ichipinda mumutsara wako. Rewind inobvumidza iwe kugadzirisa zvikanganiso uye kudzokera kubhizinesi nekukurumidza.
Nhoroondo Yeshanduro Pamunwe Wako - Gara uchienderana uye kuongorora-wakagadzirira. Runyararo rwepfungwa kuburikidza nekuchengetedza uye otomatiki data backups ndiyo mukana wekukwikwidza bhizinesi rako raunoda.
Maitiro ekuchengetedza Shopify neRewind Backups
Heino vhidhiyo pfupiso yepuratifomu.
Yako data inochengetwa otomatiki uye yakavharidzirwa zvakachengeteka… ndiko kukosha kwausingakwanise kuisa tag yemutengo pairi. Chaizvoizvo, mutengo weRewind wakanaka kwazvo. Rewind inochengetedza inoenderera mberi, kusanganisira metadata. Dzosera chero chinhu kubva pamufananidzo mumwe kuenda kuchitoro chako chese - ingo sarudza zuva iro zvese zvashanda, worova kudzorera!
ne Rewind, unogona kusarudza zuva rekudzorera dingindira rako, mablogiki, tsika dzakaunganidzwa, vatengi, mapeji, zvigadzirwa, mifananidzo yechigadzirwa, smart collections, uye/kana madingindira ako.
Tanga A 7 Day Yemahara Rewind Muedzo
kuburitsa: Isu tiri mubatanidzwa Rewind, Shopify, uye Klaviyo uye tiri kushandisa yedu affiliate links mune ino chinyorwa.
Tags: negadziriro yeparutivibackup shopify blogbackup shopify miunganidzwabackup shopify mifananidzobackup shopify zvigadzirwabackup shopify chitorobackup shopify themesei kutisei kuita backup shopifymaitiro ekuchengetedza shopify plusdzoserashopifyShopify Uyezve